फेरी युवतीमाथि एसिड र छुरा प्रहार ,, – Ranga Darpan
फेरी युवतीमाथि एसिड र छुरा प्रहार ,,
रङ्ग दर्पण सम्वाददाता	 प्रकाशित मिति: Sep 25, 2018
असोज ९ , काठमान्डौ – नवलपुरमा एक युवतीमाथि एसिड र छुरा प्रहार भएको छ ।कावासोती नगरपालिका वडा नं. ९ डण्डा बजारकी २७ वर्षीया बसन्ती परियार भरतपुर अस्पतालमा मृतुसंग लडि रहेकी छिन ।अहिले उनको अवस्था गम्भिर रहेको चिकित्सक डा. सुरेश प्रधानले जानकारी गरे ।
एसिड प्रहारबाट शरीरको करीव २५ प्रतिशत भाग जलेको छ । छुरा प्रहारबाट उनको शरीरमा गम्भीर चोट लागेको छ । उनको दायाँ गालाको हड्डी फुटेको छ । सम्झना दासको घटना सेलाउन नपाउदै नवलपुरमा यस्तो घटना घटेको हो ।
देव्रे छातीमा प्रहार भएको चक्कु करङ छेडेर फोक्सोको नजिक पुगेको डा. प्रधानले बताए । अन्य स्थानको घाउ भन्दा यो गम्भिर हेको डा. प्रधानले जानकारी दिए । देव्रे तर्फको पेटमा छुरा प्रहार हुँदा सानो आन्द्रा बाहिर निस्किएको छ ।बसन्तीमाथि एसिड प्रहार गर्ने विमल शिर्पालीलाई नवलपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनले प्रहरीसामू अपराध स्वीकार गरेका छन् । विमलले ‘पूर्वसहमति अनुसार काम नभएकाले’ एसिड प्रहार गरेको बताएका छन् ।
योजनाबद्ध रुपमा बसन्तीमाथि एसिड प्रहार गरेको देखिएको नवलपुरका प्रहरी प्रमुख रमेश थापाले जानकारी दिए । बिमलले तीजमा भारत जाँदा एसिड किनेर ल्याएका रहेछन् । लामो समयदेखि आफू बसन्तीसँग प्रेम सम्वन्धमा रहेको तर, विवाह गर्न नमान्दा आक्रमण गरेको बिमलको दाबी छ ।
सम्झनाको परिवारलाई थप ३ लाख दोषीलाई कारबाही गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम ,,
साजन राईको नाचघरमा एकल साँझ हुने ,,